Library | ZAYYA
ကျနော့ရဲ့ ဒုတိယ အိမ်လေး ဖြစ်တဲ့ အနာဂတ်အိမ်မက်နိုင်ကွင်း စာကြည့်တိုက်၊ ကျနော်တင်ထားတာကို ဒီမှာ ပြန်တင်ပါတယ်။
ဒီမှာ ဖော်ပြထားတဲ့လင့်ခ်တွေဟာ ကော်ပီ ကူးလာခြင်းသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကူးယူရာ မူလဆိုဒ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပိဋကတ်သုံးပုံ (မြန်မာပြန်) http://dhammadownload.com/MyanmarTipitaka-eBook.htm
လယ်တီဆရာတော် _ ကမ္မဋ္ဌါနဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ကမ္မဋ္ဌါန်းကျမ်းကြီး
လယ်တီဆရာတော် _ ဂမ္ဘီရကဗျာကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ စတုသစ္စ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းချုပ်
လယ်တီဆရာတော် _ ဒါနာဒိ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ဓမ္မ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ဓါတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကျမ်းသစ်
လယ်တီဆရာတော် _နိယာမ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ နိဗ္ဗာန ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ နိရုတ္တိ ဒီပနီ နိဿယ
လယ်တီဆရာတော် _ နိုင်ငံတွင်းပုစ္ဆာအဖြေပေါင်းချုပ်.ပထမတွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ နိုင်ငံတွင်းပုစ္ဆာအဖြေပေါင်းချုပ်.ဒုတိယတွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ ပဓါနသုတ် ပါဠိ နိဿယ
လယ်တီဆရာတော် _ ပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ ပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း.အဖြေ
လယ်တီဆရာတော် _ ပါရမီ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ပုဏ္ဏောဝါဒကမ္မဋ္ဌါန်း
လယ်တီဆရာတော် _ ဘယ၀ိနာသက ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ဘာဝနာ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ မဟာသယန ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ မဟော်ကျေးစေခန်း- သျှိုးလိုက်ရတု
လယ်တီဆရာတော် _ မဂ္ဂင်္ဂ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ရောဂန္တရ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ လက္ခဏ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီနိဗ္ဗာန်
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီဟောကိန်းတရားစာ
လယ်တီဆရာတော် _ ၀ိနယသံခိပ်ကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ ၀ိနိယသံခိပ်လက်စွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ ၀ိပဿနာ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ ၀ိဇ္ဇာမဂ္ဂ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ သရဏဂုံဝိနိစ္ဆယကျမ်းသစ်
လယ်တီဆရာတော် _ သာသနဒါယဇ္ဇ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ သာသန၀ိသောဓနီ.ပထမတွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ သာသန၀ိသောဓနီ.ဒုတိယတွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ သာသန၀ိသောဓနီ.တတိယတွဲ
လယ်တီဆရာတော် _ သီလ၀ိနိစ္ဆယ
လယ်တီဆရာတော် _ သုကုမာရမဂ္ဂ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ သောမနသုပေက္ခာ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ သစ္စတ္ထ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ သဒ္ဒသံခိပ်ကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ အာနာပါန ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ အာဟာရ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ အနတ္တ ဒီပနီ
လယ်တီဆရာတော် _ အနတ္တဒီပနီ ကျမ်းသစ်
လယ်တီဆရာတော် _ အလင်းကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာအလင်းပြကျမ်း
လယ်တီဆရာတော် _ ဥတ္တမပုရိသ ဒီပနီ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် အရှင်ဝိမလ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရဘိဝံသ
ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (တောင်စွန်း)
ဓမ္မရံသီဆရာတော် အရှင်သုနန္ဒ (မိုးကုတ်)
တိပိဋကဓရ မြင်းခြံဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ
ပခုက္ကူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒောဘာသ
ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆရာတော် အရှင်တေဇောသာရ (ပဲခူး)
ဆရာတော် အရှင်ဧသက (Azusa)
အပြည့်အစုံအတွက်http://www.dhammaransi.comကို ရည်ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ဆရာတော်များရဲ့ ကျမ်းစာများ ၊ ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ တကွ
တရားခွေများ ၊ ဓမ္မဆောင်းပါးများ တော်တော် စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်။
၎င်းဆိုဒ်အတွင်းမှာ မပြည့်စုံခဲ့ရင်တောင် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိတဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ် (Link) များစွာ တင်ပေးထားပါတယ် ။
မိတ်ဆွေများရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒ်များ
ရှိရင်လည်း သွားရောက် ရှယ်-ထားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့က ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
နာမည်ရှိပြီးသားမို့ သိပြီးသူများလည်း ရှိမှာပါ။
အခုတင်ထားတာတွေကလည်း အဲ့ဆိုဒ်က ကူးယူထားခြင်းမျှ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ..။
အောက်ပါ စာအုပ်များကို သည်ဆိုဒ်မှ ကူးယူလာပါသည်။ စီစဉ်ပေးထားသော ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အား အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
၂၁ ရာစုအင်္ဂ၀ိဇ္ဖာဆောင်းပါးများ _ ဦးမောင်မောင်သန်း
၃၇ မင်း _ ဦးဖိုးကျား
၁၉၃၀တ၀ိုက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်း _ သိန်းဖေမြင့်
ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း _ မောင်ဘိုသစ်
ကဗျာ့နန်းတော် _ မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်
ကရင်ရာဇ၀င် _ ဦးပညာ
ကလေးပုံပြင်များ _ မင်းသုဝဏ်
ကားထဲကမိန်းကလေး _ ဇ၀န
ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် _ ဦးရွှေအောင်
ကိုရမ်အဘိဓါန် ၁ _ မြတ်သူ
ကိုရမ်အဘိဓါန် ၂ _ မြတ်သူ
ကင်္ခါမေးခွန်းနှင့်အဖြေ _ ဦးဝိမလ
ကန့်ကူလက်လှည့် _ အောင်သင်း
ကမ္မဋ္ဌါနဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ကမ္မဋ္ဌါန်းကျမ်းကြီး _ လယ်တီဆရာတော်
ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူများ _ ရဲကောင်းထက်
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ.ဦးသန့် _ တက္ကသိုလ်စိန်တင်
ကမ္ဘာ့စာပေတစေ့တစောင်း _ နတ်နွယ်
ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ _ ဆန်းလွင်
ကမ္ဘာမြေအောက်ခရီး _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
ကမ္ဘာ့ရက်ကြီးနေ့ကြီးများနှင့် မြန်မာ့နေ့ကြီးရက်ကြီးများ _ ဦးဝမ်ထိန်
ကံနှင့်တမလွန်ဘ၀ _ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်
ကုန်းဘောင်ပြင်သစ် _ ရွှေစကြာ
ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း _ မောင်သန်းဆွေ
ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် _ ဒေါက်တာတိုးလှ
ကောင်းကင်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ _ ဘလော်ဂါနှင့် ကဗျာဆရာ/မများ
ကောင်းမှုတော်ဘုရားသမိုင်း _ ဦးထွန်းကြည်
ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
ကိုယ်တွေ့ စာစီစာကုံးများ _ အောင်သင်း
ကျေးဇူးရှင် _ ဦးနု
ကျောက်တန်းရေလယ်ဘုရားသမိုင်း _ ဦးကျော
ကျဉ်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ _ မောင်သာရ
ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး _ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကျိုက်ကမာစိန်စေတီတော်သမိုင်း _ အရှင်ပညာဝံသ
ကွန်ပြူတာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ _ မောင်မောင်မြင့်သိန်း(စက်မှုတက္ကသိုလ်)
ကွယ်လွန်သူတို့ဝိညာဉ် _ သတိုးတေဇ
ကျွန်တော်နှင့်ဈေးသည်အလွဲများ _ နီကိုရဲ
ကျွန်တော့်လင် _ ဇ၀န
ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ယဉ်ကျေးကြပြီလောနှင့် ဓမ္မစာစုများ _ ၀င်းသိန်းဦး
ကြွကြွရွရွ ဟာသ _ ငွေကြည်
ခံစားမှုကထာ _ အောင်ဝေး
ခန္ဓာငါးပါးပျောက်ဆုံးခြင်းတရား _ ကိုစံ
ခေါင်းဆောင်နှင့်အတွေး _ မောင်သာမည
ခေတ်စမ်းကဗျာ-၁ _ မြန်မာပြည်ပညာပြန့်ပွါးရေးအသင်း
ခေတ်ပြိုင် အိုင်ကျူ _ မောင်ရေအေး
ခေတ်အမြင်နှင့် သိမှတ်စရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအကျဉ်း _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ချက်ပြုတ်အတတ်ပညာ _ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
ချစ်မြားရှင်အစ ချစ်မြားရှင်အဆုံး _ မင်းလူ
ချစ်သောပါဒဧကရီ _ ချစ်ဦးညို
ချစ်သူမှာတမ်း _ အောင်ကောင်း
ချမ်းသာစစ်ကို သိမြင်လိုပါက _ အရှင်ဣန္ဒက
ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်းနှင့် သြ၀ါဒကောက်နုတ်ချက် ၅၀ _ အရှင်ဣန္ဒက
ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင်ဝတ္တုတိုများ _ ၀င်းတင့်ထွန်း
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသူခိုးနှင့်မိုပါဆွန်း _ မောင်ထွန်းသူ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်နှင့်.. _ မောင်စူးစမ်း..
ဂူလီနီယံနှင့် အမေရိကကိုပြောင်းလဲခဲ့သောနေ့ _ မိုးဟိန်းကို
ဂန္ထ၀င်မြန်မာကဗျာ _ မောင်သာနိုး
ဂဗ္ဒလီလာကြဏ်း , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၈၉၉ _ ဥာဏ၀ံသ
ဂမ္ဘီရကဗျာကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
ဂမ္ဘီသာရပျို့ စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၂၈၉ ခုနှစ် _ အရှင်ရဋ္ဌသာရ
ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား _ သုခ
ဂျာမဏီအတွင်းရေး _ ဘခိုင်
ဂျီဟောသူ _ မစန္ဒာ
ဂျုလိယက်ဆီဇာ _ မန်းတင်
ငရဲဆိုတာချိုနဲ့လား _ ဦးနု
ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ _ ဦးပုကလေး
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ _ ဦးအောင်ခင်
ငါ့ဒိန်ခဲကို ဘယ်သူနေရာရွှေ့သလဲ _ မြတ်ငြိမ်း
ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာနှင့်လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုများ _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
ငြိမ်သက်တစ်မိနစ် _ ဖေမြင့်
စကားပုံအလင်းပြကျမ်း _ ကြည်ဦး
စတုသစ္စ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
စတုသစ္စပကာသနီကျမ်း _ ဦးရဿက
စာပေလူကြမ်းမင်းသားအောင်သင်းနှင့်တွေ့ဆုံပေးခြင်း _ ၀င်းငြိမ်း
စာဖတ်ခြင်း ၁ _ ဇင်သန့်
စာဖတ်ခြင်း ၂ _ ဇင်သန့်
စာဖတ်ခြင်း ၃ _ ဇင်သန့်
စာမဲ့ကဗျာ _ ဗဂျီအောင်စိုး
စာရေးဆရာတို့၏ ပထမဆုံးလက်ရာမွန်များ _ ရွှေဥဒေါင်း +၅
စုဖုရားလတ်ရှင်းတမ်းနဲ့ ပါတော်မူဖြစ်ရပ်များ _ ကောင်းထက်
စူဠဝေဒလ္လသုတ်-၀ိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာအမေးအဖြေများ _ မိုးကုတ်ဆရာတော်
စောရသက်ပြင်းနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ _ ချစ်ဦးညို
စစ် _ လင်းဝေမြိုင်
စစ်ကိုင်းသမီး ဒိုင်ယာရီ _ ခင်ဆွေဦး
စစ်ကိုင်းတောင်သမိုင်း _ ရွှေပြည်ဦးဘတင်
စစ်အတွင်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်း _ သိပ္ပံမောင်ဝ
စစ်အုပ်စုသက်တမ်းရှည်နေသ၍ _ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တစ်ဦး
စန္ဒီမိုးဦးဖြူ _ တင်သန်းဦး
စိတ်ဓါတ်ကိုမြှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် _ တိပိဋကယောဆရာတော်
စိတ်ဓါတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး _ ဖါးအောက်တောရဆရာတော်
စိတ်ပညာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား _ ဦးအေးမောင်
စိတ်လျှော်ဖွတ်တဲ့အလုပ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ _ ဦးအေးမောင်
စိတ်ဝင်စားစရာသင့်ခန္ဓာ _ ဒေါက်တာလှဖေ
စိန်ရောင်ခြည်နှင့်ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး _ အရှင်အရိယ၀ံသ
စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း _ ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်
စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်မြို့ _ အုတ်ဘိုဆရာတော်
ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ _ နေ၀င်း
ဆရာတော်ကြီးရှစ်ပါး၏ ၀ိပဿနာရှုနည်းညွှန့်ပေါင်း _ ဦးတင်မြင့်
ဆရာတော် ဦးဝိစာရ _ ဦးအုန်းကျော်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ _ ဗမာ့ခေတ်ဦးဘရင်
ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ပျားစွဲသောမုတ်ဆိတ် _ မင်းသိင်္ခ
ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြိုင်မဟာမမြလေး _ မင်းသိင်္ခ
ဆားပုလင်းမင်းအောင်နှင့်ပန်းကိုးပွင့်ဒေ၀ီ _ မင်းမြတ်သူရ
ဆီးချိုရောဂါနှင့်မျက်စိ _ ဒေါက်တာမင်းသိမ်း
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအကြောင်း _ ဒေါက်တာဦးတင့်ဆွေလတ်
ဆေးပေါင်းခတဲ့မျက်ရည် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
ဆေးမကူဘဲငြိမ်းအေးနည်း _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဆိုးပေ ၁ , မယာမီဒီယာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၀ မေလ _ ဇ၀န
ဆိုးပေ ၂ _ ဇ၀န
ဆိုးပေ ၃ _ ဇ၀န
ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်း _ ချစ်စိန်လွင်
ဆွေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိပ် _ အကြည်တော်
ဇ _ အကြည်တော်
ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်း _ ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်
ဇေယျ စာတန်း , ညွှန့်ဋ္ဌေးစာပေတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၅ _ ဇေယျ
ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလံ _ သုခ
ဇော၇ကြိမ်အကျိုးပေးပုံ.ကပ်ကျော်တရားတော် _ မိုးကုတ်ဆရာတော်
ဇက်ပေါ်ကဆီးသီး _ နီကိုရဲ
ဇမ္ဗုပဓိမင်းချွတ်ခန်းဝတ္ထု _ ပါဠိဆရာဘေ
ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ _ ဦးဘကြည်
ဥာတပရိညာ _ ဦးစက္ကိန္ဒ
ဥာဏ်လမ်းပေါ်လျှောက်လူတစ်ယောက်အကြောင်း _ ဆန်းလွင်
ညီတော်အာနန္ဒာ၏ တစ်သက်တာမှတ်တမ်း ဒုတိယတွဲ _ ဦးဝဏ္ဏသီရိ
ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ် _ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်
ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ _ ဇော်ဂျီ
တတိယမြန်မာ-အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲနှင့်မင်းလှခံတပ်(သုတေသနစာတမ်း) _ စာပေနှင့်အသိဥာဏ်မြင့်တင်ရေးအဖွဲ့်
တနင်္လာအကြည့်များ _ မောင်ညိုပြာ
တဖန်ပြန်၍မနိုးသောဝေဒနာ _ နတ်နွယ်
တရားချစ်တဲ့သူ _ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ
တရားတောင်း၊ဆုပေး၊ဆုတောင်း ရေစက်ချအမျိုးမျိုး _ ဦးထွန်းလှ
တရားမရခြင်း အကြောင်းရင်း _ ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ
တရားအနှစ်သာရများ _ ဝေဘူဆရာတော်
တာတေစနေသား _ ဦးနု
တီထွင်မှုမှော်ဝိဇ္ဖာကြီး အယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင် _ ချစ်စံဝင်း
တုနိုင်းမမှီ _ အရှင်ကောဝိဒ
တူသော..၀တ္ထုတိုများ _ မင်းသိင်္ခ
တောသားကြီး _ အကြည်တော်
တော်ကူးဆရာတော် ဘ၀ဆည်းဆာနှင့် ကျင့်စဉ်တရား _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား _ ချစ်စံဝင်း
တိုတိုထွာထွာ ဟာသ _ ငွေကြည်
တက်ခေတ်နတ်ဆိုး _ သိန်းဖေမြင့်
တောင်ငူသမိုင်း(မြတ်စောညီနောင်ဘုရား) _ မောင်ဘွား
တစ်ဘ၀သာသနာ _ အရှင်ဃောသိတ
တစ်ရာနှင့်တစ်ရက် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
တမ်းတတတ်သည် _ ကြည်အေး
တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန် _ တင်မောင်
တွေးသူများ _ ကိုတာ
ထီးရနံ့ နန်းရနံ့ _ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ _ အရှင်ဧသိက
ထေရ၀ါဒအုတ်မြစ် _ ဦးရွှေအောင်
ထေရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းချုပ် _ လယ်တီဆရာတော်
ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ပရလောကနယ် _ ကြည်ဦး
ထူးအတွေ့ကြုံအဆန်း စ္ဆေဇာတ်လမ်းများ _ ဒေါက်တာအောင်ကျော်
ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၀၀၄ ဧပြီ _ ရန်အောင်မောင်မောင်
ဒါနာဒိ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ဒါရုက္ခာပမသုတ္တန် တရားတော် _ အရှင်ဣန္ဒက
ဒီဗလားရား _ ဦးညီပု
ဒိုမီနီယံအန္တရာယ် _ သခင်စိုး
ဒုဋ္ဌဂါမဏိ _ ချစ်ဦးညို
ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း _ ချစ်ဦးညို
ဒေသနာပန်းခင်း တတိယတွဲ _ ပန်းငွေရုံဆရာတော်
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် သို့မဟုတ် အရိပ်ကောင်းသောသစ်တစ်ပင် _ စိုးနေလင်း
ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ _ ချစ်စံဝင်း
ဓမ္မကဗျာ ပဒေသာ _ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်
ဓမ္မချမ်းသာတွေ့အောင်ရှာ _ အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ
ဓမ္မစေတီရှင်းတမ်း စာတန်းလွှာ _ ထေရ၀ါဒလူငယ်များ
ဓမ္မစကြာတရားတော်နှင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တရားတော် _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ _ ဖါးအောက်တောရဆရာတော်
ဓမ္မ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ _ မဟာစည်ဆရာတော်
ဓမ္မပဒ _ ဦးရွှေအောင်
ဓမ္မပဒအဆုံးအမများ. ပါဠိ-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် _ ဦးခင်မောင်ကြီး
ဓမ္မပါလပျို့ _ အရှင်မဟာသီလ၀ံသ
ဓမ္မရေစင်ရွှေသံလွင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြင်ကွင်း _ အောင်ဆန်းတပ်ဦးဆရာတော်
ဓမ္မအတွေးအမေးအဖြေများ _ အောင်ဆန်းဆရာတော်
ဓါတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကျမ်းသစ် _ လယ်တီဆရာတော်
ဓါတ်စာကျမ်း _ ဦးလွှား
နယူးဇီလန်တရားတော် _ ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော်
နာဂလိုဏ်ဂူ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် လယ်တီဝိပဿနာ _ ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ
နာထ သုတ္တန် _ ဖါးအောက်တောရဆရာတော်
နားနားပြီးပြော _ စိုးဝင်းမြင့်
နားလည်နိုင်ခြင်း၏စွမ်းအား _ ဦးရေ၀တ
နိပါတ်တော်လာဇာတ်တော် ငါးရာငါးဆယ် အနှစ်ချုပ် _ ဦးအောင်ညွှန့်ဝင်း
နိယာမ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
နိယာမဗဟိုပြုခေါင်းဆောင်မှု _ ခင်မောင်ညို
နိရုတ္တိ ဒီပနီ နိဿယ _ လယ်တီဆရာတော်
နီနီလေး _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
နေပန်းပွင့်၏အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ် _ စမ်းစမ်းနွဲ့
နေမိ ရကန် _ ကင်းဝန်မင်းကြီး
နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁၉၀၀ ခုနှစ် _ အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ
နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် _ ချစ်ဦးညို
နေရေးဆင်ခြင်သေရေးမြင် _ အောင်ဆန်းဆရာတော်
နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်. Everyday Internet _ မျိုးသူရ
နံနက်ခင်းသြ၀ါဒများ _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
နံနက် သုံးနာရီ _ ဆောင်းဝင်းလတ်
နှလုံးသား နှင့်ကန်တဲ့ဘော်လုံး _ နီကိုရဲ
နှလုံးသားမိတ္တူ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
နို့နှစ်လုံးဖိုးကျေပါတယ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
နက္ခတ္တ ဒီပနီကျမ်း _ ကိုဘတင်
နတ်စောင့်ပျားနှင့် သားရဲတို့ရွာ _ ဖိုးကျော့
နတ်နေကိုင်း _ အကြည်တော်
နှစ် ၁၀၀ ကမ္ဘာ့စုံထောက်ဝတ္ထုတိုများ ၂ _ မြသန်းတင့်
နှစ်ထပ်ဆလံ _ မာလာ
နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁ _ မြန်မာသမားတော်ကြီးများ
နိဗ္ဗာန ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
နိဗ္ဗာန် _ ပါရဂူ
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တရားတော်များ _ သပြေကန်ဆရာတော်
နိဗ္ဗာန်ပို့မည့်တရားတော်များ _ ဦးကံညွှန့်
နိဗ္ဗာန်အယူအဆ ကို ထေရ၀ါဒရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း _ ဒေါက်တာဓမ္မပီယ
နိုင်ငံခြားပုစ္ဆာ အဖြေပေါင်းချုပ် _ လယ်တီဆရာတော်
နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်မြောက်ရေး _ သန့်စင်
နိုင်ငံတွင်းပုစ္ဆာအဖြေပေါင်းချုပ်.ပထမတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
နိုင်ငံတွင်းပုစ္ဆာအဖြေပေါင်းချုပ်.ဒုတိယတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
နိုင်ငံရေးရာအဖြာဖြာ ဒုတိယတွဲ _ ဦးဘဘေ
နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးနှင့် ဗေဒင်ပညာ _ သိန်းပိုင်
ပညာရဲ့သဘော _ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်
ပညာသိုက် _ တိုက်စိုး
ပဋိစ္စသမုပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာ အမေးနှင့်အဖြေအကျဉ်းချုပ် _ ဦးဇနိတာလင်္ကာရ
ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်ဖြတ်လမ်း _ အောင်ဆန်းဆရာတော်
ပဌမတန်း မြန်မာဖတ်စာ _ ဦးဝန်နှင့် ဦးဘ
ပထမတန်းစားစိတ်ဓါတ် _ လူထုစိန်ဝင်း
ပထ၀ီနိုင်ငံရေး _ သောင်းထိုက်
ပဓါနသုတ် ပါဠိ နိဿယ _ လယ်တီဆရာတော်
ပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
ပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း.အဖြေ _ လယ်တီဆရာတော်
ပါရမီ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ပိဋကတ်မှ ဗုဒ္ဓနှင့် ဓမ္မ _ ဦးအေးမောင်
ပဋာစာရီ- ဒုတိယပိုင်း _ ဦးမောင်သိန်း
ပိဋကတ်အသွား.နတ်လမ်းညွှန်အဆန်း _ ဆရာလွန်း
ပါဠိစာပေသမိုင်း _ ဒေါ်အုန်း
ပါးစပ်ရာဇ၀င် _ မှော်ပီ ဆရာသိန်းကြီး
ပီကာဆို၏ပဉ္စလက်မီးအိမ် _ မြသန်းတင့်
ပုဂံခေတ်မြန်မာကျောက်စာများလာဝေါဟာရလေ့လာချက် _ ပါမောက္ခဒေါ်တင်အုန်း
ပုရပိုက် _ ၀င်းတင့်
ပုရာဘေဒသုတ်တရားတော် _ မဟာစည်ဆရာတော်
ပေတလူ _ မင်းသိင်္ခ
ပိုးကောင်များ _ အကြည်တော်
ပင့်ကူအိမ် လူ့အဖွဲ့စည်း _ ကျော်ဝင်း
ပစ္စည်းလေးပါးတရားတော် _ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်
ပုစ္ဆာ _ မစန္ဒာ
ပုဏ္ဏားတိုင် _ ကြည်နိုင်
ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၁ _ မင်းသိင်္ခ
ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၂ _ မင်းသိင်္ခ
ပုဏ္ဏောဝါဒကမ္မဋ္ဌါန်း _ လယ်တီဆရာတော်
ပေါင်းတည်သမိုင်း _ ဦးထွန့်ညွှန့်
ပြေပြေလည်လည်ရှိစေချင်တယ် _ ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ
ပြုံးပြီးမှရယ် _ ရဲစတိုင်း
ပြင်သစ်နိုင်ငံသွား နေ့စဉ်မှတ်တမ်း _ ကင်းဝန်မင်းကြီး
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ(ရာဇသတ်ကြီး)အဘိဓါန် _ ဦးကျော်ဇေယျ
ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ _ ဦးသိန်းဟန်
ပြည့်ပြည့်၀၀ ဟာသ _ ငွေကြည်
ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွါသံ _ တာရာမင်းဝေ
ဖို + မ ဆက်ဆံရေး _ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်
ဖက်ဆက်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်လပ်ရေးသို့ _ သန်းထွန်း
ဖလ်မီးအိမ် _ တင်မိုး
ဖောင်ဖျက်တိုက်ပွဲ နှင့် မထေရ်မြတ်တို့စကားဝိုင်း(၆) _ အရှင်ဝီရိယ
ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၁ _ မင်းသိင်္ခ
ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၂ _ မင်းသိင်္ခ
ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒ နှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ _ ဆန်းလွင်
ဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းနှင့် အခြားစာတမ်းများ _ ကိုတာ
ဗမာ့နိုင်ငံရေးသုခမိန် _ မောင်ထင်
ဗမာ့လက်ငင်း-လွတ်လပ်ရေး _ ဒေါက်တာဘမော်
ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပတွဲ , မြန်မာ့သိပ္ပံစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၁၅.၁၀.၁၉၃၈ _ ဦးလှ
ဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် _ ဦးအေးမောင်
ဗေဒနီတိကျမ်း , မဟိန္ဒစာပုံနှိပ်တိုက် , ၁၉၃၀ _ သာဓိန
ဗေဒါလမ်း _ ဇော်ဂျီ
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့ရသော မေးခွန်းနှင့် ပြဿနာများပေါင်းချုပ် _ ဦးစန်းငွေ
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ပထမတွဲ _ ငွေဥဒေါင်း
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ဒုတိယတွဲ _ ငွေဥဒေါင်း
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ တတိယတွဲ _ ငွေဥဒေါင်း
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ စတုတ္ထတွဲ _ ငွေဥဒေါင်း
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ပဉ္စမတွဲ _ ငွေဥဒေါင်း
ဗုဒ္ဓညွှန်ကြား မသေဆေးတရား _ ဘဒ္ဒန္တကိတ္တိသာရ
ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် _ သာ.ထွန်း.ပြန့်
ဗုဒ္ဓဘာသာစာရိတ္တပညာနှင့်ကျင့်ဝတ်များ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတ မာတိကာကျမ်း _ ဦးချစ်မောင်
ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲကျမ်း ပထမတွဲ _ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗုဒ္ဓဘာသာအနုပညာနိဒါန်း _ တိုက်စိုး
ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့်ခေတ်သစ်ဘ၀ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း _ ဦးရွှေအောင်
ဗုဒ္ဓ၀ါဒပြဿနာများ _ ဦးအရိယဓမ္မ
ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့ _ ဦးရွှေအောင်
ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံ _ ဦးသက်စိန်
ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တရားဦးဓမ္မစက် _ အရှင်ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ
ဗုဒ္ဓအမြင် _ ပါရဂူ
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျကျင့်သုံးနေထိုင်နည်း .ဒုတိယတွဲ _ အရှင်ကုမာရ
ဗုဒ္ဓအံတော်သမိုင်း _ သီလ၀
ဗုဒ္ဓ၏ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ ပေါင်းချုပ်. ဒုတိယတွဲ _ ဦးမောင်မောင်လေး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ _ ဦးအောင်ခင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမွိုင်သို့လျှို့ဝှက်ခရီး _ မြင့်ထွန်း
ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်သမိုင်း _ ဦးကြီးဖေ
ဗောဇ္ဈင်ခုနှစ်ပါးတရားမြတ်ရတနာ _ သပြေကန်ဆရာတော်
ဗြောစည်တီး၍လှူလိုက်သည် _ ထူးဆွေအောင်
ဘယ၀ိနာသက ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ဘ၀ကိစ္စနှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀ခရီးသည် _ ပါရဂူ
ဘ၀ချမ်းသာရေး _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀တစ်ခုအမှတ်ရ _ ဆွေမင်း. ဓနုဖြူ
ဘ၀တစ်လျှောက်စိတ်အေးချမ်းစွာနေသွားနည်း _ စိုးဝင်းထွဋ်
ဘ၀နှင့်ရင်းရသော အတွေးအမြင်များ ၁ _ အရှင်ဇ၀န
ဘ၀ဖန်တီးရှင် ကံတရား _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀ရည်မှန်းချက်နှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀လမ်းညွှန်လက်ဆောင်မွန် .ပထမတွဲ _ ယောဆရာတော်
ဘ၀လမ်းနှစ်သွယ် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀လွတ်မြောက်ရေးနှင့်အရိယသစ္စာ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀သစ္စာအဖြေရှာ _ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်
ဘ၀အကျဉ်းသား _ ဦးရွှေအောင်
ဘ၀အတန်တန် ကံအထွေထွေ _ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်
ဘ၀အမြင်သစ် _ ဦးရွှေအောင်
ဘ၀အောင်မြင်ရေးသို့ရှေးရှုကြ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ဘ၀၏အလှတရားကိုရှာဖွေခြင်း _ ချစ်စံဝင်း
ဘာဝနာ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ဘာသာကြီးလေးခု အနှစ်သာရများ _ ညိုသောင်း
ဘာသာရေးပြဿနာများ _ ရဝေထွန်း
ဘီလူးတို့ရွာ _ ဦးသောင်း
ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး မူဟောင်း နှင့် ၀တ်ရွတ်စဉ်
ဘုရားရှင်တို့၏လက္ခဏာတော်(၃၂)ပါး _ အရှင်နာယကာလင်္ကာရ
ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် _ ဖေမြင့်
ဘဏ်ငွေစက္ကူတန်ဖိုး _ မောင်စိန်
ဘုန်းရယ်၊ကံရယ်၊ကုသိုလ်ရယ် _ အရှင်ဝီရိယ
မကြောက်ဖူးလို့ဆို _ ထူးဆွေအောင်
မဃဒေ၀လမ်းညွှန်နီတိများ _ မာန်လည်ဆရာတော်
မဏိစန္ဒာဥဒါန်း _ ချစ်ဦးညို
မနောမယထမင်းဝိုင်း _ မင်းသိင်္ခ
မနက်ဖြန်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း… _ နန္ဒသိန်းဇံ
မပျော်ရင်ကော _ ထူးဆွေအောင်
မရှိမဖြစ်စင်ကြယ်ခြင်း ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ
မဟာဂန္ဓာရုံဝတ်ရွတ်စဉ် _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
မဟာသကျသီဟဘုရားသမိုင်း , ၆.၂. ၁၉၆၄ _ လှပိုင်
မဟာသယန ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
မဟော်ကျေးစေခန်း- သျှိုးလိုက်ရတု _ လယ်တီဆရာတော်
မာလုကျပုတ္တသုတ်တရားတော် _ မဟာစည်ဆရာတော်
မိဘကျေးဇူးဆပ်ဖူးပြီလား _ အောင်ဆန်းဆရာတော်
မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
မိဘများအတွက် အရိပ်ပြစကားလက်ဆောင်မွန်များ _ ဒေါက်တာသိန်းလွင်
မိလိန္ဒပဥှာ _ မာဏ၀
မူပိုင်ခွင့် _ လူထုစိန်ဝင်း
မူလ=ဆေးအဘိဓါန်ကျမ်း _ ဦးကျော်ရန်
မူလပေါရာဏဒီပနီကျမ်း _ ဦးကျော်ရန်
မိုရေးဗီးယား၏အတိုင်းအတာများနှင့်. _ နတ်နွယ်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်ဘ၀သာသနာ _ အရှင်ဃောသိတ
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်ကျင့်စဉ် _ ဦးကျော်သိန်း
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊တရား၊အနှစ်သာရနှင့် ရှုပွါးနည်း _ ဦးကံညွှန့်
မိုးတိမ်ပုံပြင် _ အကြည်တော်
မိုးနဲ့အတူ _ မင်းသိင်္ခ
မေ _ ဒဂုန်တာရာ
မေ၀ါ၏ကလဲ့စား _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
မေ့အိပ်မက် _ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး
မော်ဒယ်အသစ်နဲ့လူ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
မက်မပြေဟာသ _ ငွေကြည
မဂ္ဂင်္ဂ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင် _ သဲအင်းဂူဆရာတော်
မင်္ဂလာအစစ် နှင့် မျိုးဆက်သစ် _ သန်းသန်းတင့်
မင်းမေးတိုင်း ငါကဖြေရမှာလား _ မင်းသိင်္ခ
မစ္ဇျိမပဋိပဒါရှင်းချက် _ ဦးကြည်
မန်ကျည်းပင်တန်းရဲ့မီဒီယာ _ ထူးဆွေအောင်
မန္တေလေးဘွဲ့ မော်ကွန်း _ ဦးပုည
မှန် _ သာမဏအာဇာနီ
မှန်ကန်သောဘ၀အမြင် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မောင်ခွေးဖို့ကဗျာများ _ မင်းသုဝဏ်
မောင်တို့မယ်တို့တိုးတက်စေဖို့ _ တက်တိုး
မိန်းမဋီကာ _ အကြည်တော်
မိတ္တဗလ ဋီကာ _ ဦးနု
မေတ္တသုတ် _ သုခ
မေတ္တာဂုဏ်ရည် _ အရှင်ဣန္ဒက
မေတ္တာနှင့် သစ္စာသရုပ်ဖော် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မေတ္တာနှင့် သစ္စာအဖွင့် _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မေတ္တာပန်းခိုင် သုံးပွင့်ဆိုင် _ တိပိဋက ယောဆရာတော်
မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း , ပြည်ကြီးမန်တိုင်စာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် _ အရှင်သီဟာဘိဝံသ
မေတ္တာဝါဒ _ ဦးဌေးလှိုင်
မိုင်းပေါ်စော်ဘွားစ၀်စံထွန်း _ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှမ်းစာပေမြင့်တင်ရေးအသင်း
မှောင်မိုက်မှာငို _ မြသန်းတင့်
မြစေတီ-မွန်ကျောက်စာ _ ဒေါက်တာဖေမောင်တင်
မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၁ _ မင်းသိင်္ခ
မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၂ _ မင်းသိင်္ခ
မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၃ _ မင်းသိင်္ခ
မြို့ရွာစစ်တမ်းများ _ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်
မြင့်မြတ်သူတို့၏ အလုပ် _ ရဝေနွယ်
မြင့်မြတ်သောဥပေက္ခာ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှသဲပွင့်ကလေးများ _ ထူးဆွေအောင်
မြင်းဦးခေါင်းနှင့် ကောင်းကင်သတို့သမီး.ပိုးလမ်းမပုံပြင်များ _ လင်းတည်ဦး
မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာ _ ဒေါက်တာ ၀ါလ်ပိုလာရာဟုလာ
မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာမဇ္ဈိမဒေသ _ အရှင်ကေလာသ
မြတ်လယ်တီ _ ချစ်စံဝင်း
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း _ မြန်မာစာအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန
မြန်မာဆိုရိုးစကား _ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန
မြန်မာတို့၏ကိုးကွယ်မှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဒဿနရှုထောင့်မှ လေ့လာတင်ပြခြင်း _ ဒေါ်စွမ်းကြည်
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ _ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှလူဝင်စားများ _ တိုးထက်
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်၏ဘ၀ _ ဒေါက်တာလှဘေ
မြန်မာမျက်ပွင့် _ ဇေယျ
မြန်မာရာဇ၀င်ချုပ်နှင်ရွှေနတ်တောင်ဘုရားသမိုင်း _ ဆရာလွန်း
မြန်မာဝတ္ထုတို ၁၀၀ _ မင်းသုဝဏ်+
မြန်မာအနုပညာလက်ရာပစ္စည်း _ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
မြန်မာ့မဟာဂီတ _ လူထုဒေါ်အမာ
မြန်မာ့ရိုးရာစကားထာများ _ ကြည်ဦး
မြေမြတ်မဟာတရားမြတ်ဒေသနာ _ တိပိဋကအရှင်သုမင်္ဂလာလင်္ကာရ
မြောက်ဦးမြို့ဘုရားသမိုင်း _ ဦးသာထွန်း
မြိတ်ရာဇ၀င်တော်ကြီး _ ဆရာကြီးစိန်
မြိုင် _ ဒဂုန်တာရာ
မိန်းမလှ အမုန်း _ ၀င်းဦး
မျိုးဆက်သစ်တို့ တိုးတက်ရစ်ဖို့ _ အောင်သင်း
မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House ,ရန်ကုန်,၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ _ အောင်သင်း
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ , ရန်ကုန် _ သုမောင်
မြတ်တရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ _ ဦးနု
မြတ်ဒါန _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်ဓမ္မ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်ဗုဒ္ဓ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်ဘာဝနာ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်သရဏဂုံ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်သီလ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြတ်သံဃာ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်
မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ _ ဦးကျော်ဇေယျ
မြန်မာရာဇ၀င်ပုံပြင်ဝတ္ထု _ ဦးကံမြင့်
မြန်မာ့ဆေးမီးတို _ နေ၀င်း(လန်ဒန်)
မြန်မာ့ပုံတိုပတ်စများ _ မောင်ဗိုလ်မွှေး
ယောနသံဇင်ရော် _ ဦးဘသန်း
ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း _ မောင်ထင်
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု _ ပုညခင်
ရခိုင်မင်းသား , သံတော်ဆင့် , ၁၉၄၆ _ ဦးစန်းမောင်
ရတနာဂီရိ မှ သီပေါမင်းအမှတ်တရ _ အေးသိန်း
ရတနာပုံ _ ရွှေဥဒေါင်း
ရတနာပုံမှ ရတနာဂီရိသို့ _ အောင်ဇေ
ရတနာပုံ၏နိဒါန်းနှင့်နိဂုံး ဒုတိယပိုင်း _ ဒဂုံခင်ခင်လေး
ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လူသူ တစ်ယောက်အကြောင်း _ ဆန်းလွင်
ရတနာသုံးပါးကျေးဇူး ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ _ ဦးဌေးလှိုင်
ရတနာ့ဂုဏ်ရည် _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ _ ဦးဌေးလှိုင်
ရာဇကုမာရ _ ချစ်ဦးညို
ရာဇဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း _ နိုင်ပန်းလှ
ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း _ မောင်ထင်
ရာဇ၀င် _ ဦးကုလား
ရဲဘော်သုံးကျိပ် _ ကျော်ငြိမ်း
ရိုးရာမှသည် ခေတ်သစ်ဆီသို့ _ ဗဂျီအောင်စိုး
ရိုးရိုးကြီးဇေယျ၏ဘ၀ခရီး _ မင်းယုဝေ
ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးနတ်ဖြစ်ပြဇာတ်သစ် ပထမတွဲ _ ဦးမောင်ကြီး
ရေပြာအိုင်မှဇာတ်လမ်းများ _ မ၀င်းမြင့်
ရေမျှောကမ်းတင်အောင်ဗဒင် _ မင်းသိင်္ခ
ရေသည်ပြဇာတ် _ ဦးပုည
ရောဂန္တရ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ဗုဒ္ဓမဝေဖန်နှင့်. _ ၀င်းသိန်းဦး
ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
ရင်သားကင်ဆာသိကောင်းစရာများ _ မင်းဓါတု
ရင့်ကျက်စိတ်ထားဥာဏ်စွမ်းအားဖြင့် _ အောင်ဆန်းတောရတပ်ဦးဆရာတော်
ရည်စူးကုသိုလ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
ရောင်စုံရုပ်ပြပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းနှင့်ရှင်ချက်များ _ ခင်မောင်အေး
ရုက္ခစိုးမယားနဲ့အခြားပြိတ္တာများ _ ချစ်ဦးညို
ရုပ်စုံဗုဒ္ဓသာသနာဝင် _ ဦးဘကြည်
ရုပ်ထုကျိန်စာ _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
ရုပ်လှချင်ရင် _ ရဝေနွယ်
ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း ၀တ္ထုတိုများ _ စိန်စိန်
ရှက်စိတ် _ လူထုစိန်ဝင်း
ရှက်ပြုံး _ ချစ်စံဝင်း
ရှင်စောပု _ ချစ်ဦးညို
ရှင်မရေ-၁ _ မောင်ခိုင်မာ
ရှင်မရေ-၂ _ မောင်ခိုင်မာ
ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာ _ ရွှေနှင်းဆီ
ရှင်ဥတ္တမကျော်တောလား နှင့် လက်ဝဲသုန္ဒရ ရတုများ
ရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ တတိယတွဲ _ ဦးငြိမ်းမောင်
ရွေးချယ်ရမည့်မိန်းမကောင်း. ရှာဖွေရမည့်ဇနီးလောင်း _ ဦးထွန်းလှ
ရွှေချမ်းသာ ငွေချမ်းသာ _ မင်းမြတ်သူရ
ရွှေစင်နတ်ဘုရား _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
ရွှေစည်းခုံမွန်ကျောက်စာ _ ဒေါက်တာဖေမောင်တင်
ရွှေရောင်ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ _ စိန်စိန်
ရွှေဝါပြည် _ ရန်ကုန်ဘဆွေ
ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံးစာစီကုံး _ အောင်သင်း
လီယာမင်းကြီး _ မင်းသုဝဏ်
လူငယ်များကမေးကြသည် ၂ _ ချစ်စံဝင်း
လူငယ်များနှင့်စကားပြောခြင်း _ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း
လူငယ်သင် အခြေပျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ _ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်
လူတိုင်းမှာအလားအလာရှိတယ်နှင့် _ မြင့်စိုးလှိုင်
လူတိုင်းသိစေချင်ပါသည် _ အရှင်ဆေကိန္ဒ
လာခြင်းကောင်းသောအရှင် _ မြသန်းတင့်
လိပိဒီပိကာကျမ်း _ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်
လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်း _ ကိုတာ +
လူငယ်များအတွက် အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း _ ဦးပညာသာမိ
လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟာသ _ ငွေကြည်
လူနဲ့မူ _ ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း
လူပျိုဘုရားလုံးဝမရှိ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
လူရှင်သင်္ချိုင်းများအကြောင်း _ နေလင်း
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူများနှင့်. _ ဖေမြင့်
လူ၏စွမ်းအားမြတ်တရား _ ယောဆရာတော်
လေရူးသုန်သုန် _ နန္ဒ
လောကကျက်သရေ _ အရှင်ဝီရိယ
လောက၊ဓမ္မ၊ဘ၀၊ နီတိ ပဒေသာ
လောကနီတိ .အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာ _ တက်တိုး
လောက၌အကောင်းဆုံးသောအရာ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
လောကီပညာ ပဒေသာကျမ်း _ ဦးကျော်
လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ _ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ
လက္ခဏ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
လက်ရွေးစင် ဆရာ့ဇာတ်လမ်းစုံ _ မောင်သင်
လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၃ ကျမ်းတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
လယ်တီနိဗ္ဗာန် _ လယ်တီဆရာတော်
လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ _ လယ်တီဆရာတော်
လယ်တီဟောကိန်းတရားစာ _ လယ်တီဆရာတော်
လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၃ _ ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ
လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၄ _ ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ
လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၅ _ ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ
လိမ္မာယဉ်ကျေး တို့ရင်သွေး _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ _ ဒေါက်တာဓမ္မပီယ
လွယ်အိတ်ထဲကအလွဲများ _ နီကိုရဲ
လွယ်အိတ်နှင့်အခြားဆောင်းပါးများ _ မြန်မာ့အလင်းသန်းညွှန့်
၀ရုဏပျို့ _ ဦးဘေ
၀သုန္ဓရီနှင့်ရိုးရာအထိမ်းအမှတ်များ _ တိုက်စိုး
၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် ၁၂၉၀ ကဆုန်လ _ ဦးဣန္ဒောဘာသ
၀ိနယ ၀ိနိစ္ဆယ သင်္ဂဟ _ မဟာစည်ဆရာတော်
၀ိနယသံခိပ်ကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
၀ိနိယသံခိပ်လက်စွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
၀ိနိစ္ဆယလက်စွဲ _ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
၀ိပဿနာဂုဏ်ထူးဆောင်တော်ကူးဆရာတော်နှင့် ထူးဆန်းစွာရောဂါပျောက်ခြင်းများ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
၀ိပဿနာတရားအမေးအဖြေများ(၁) _ အရှင်ဆေကိန္ဒ
၀ိပဿနာတရားအမေးအဖြေများ(၂) _ အရှင်ဆေကိန္ဒ
၀ိပဿနာ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
၀ိပဿနာရှုနည်းများ-၁ _ ကျော်နန္ဒအောင်
၀ိပဿနာရှုနည်းများ-၂ _ ကျော်နန္ဒအောင်
၀ိပဿနာရှုနည်းအကျဉ်းချုပ် _ မဟာစည်ဆရာတော်
၀ိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်ကြီ; _ မဟာစည်ဆရာတော်
၀ိသာခါနှင့် သီတာ _ ချစ်ဦးညို
၀ီထိနှင့် သုံးချက်စု ဘာသာဋီကာ _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
ဝေဒနာကြာနီပွင့် _ မိုးမိုး
၀ံသာနုရက္ခိတ၀ိနိစ္ဆယ ဒီပနီ _ ဦးဥာဏိန္ဒ
၀ဏ္ဏပပ _ ဗိုလ်အေးအောင်
၀ိဇ္ဇာမဂ္ဂ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သတိယှဉ်မှ တရားမြင် _ အရှင်ဣန္ဒက
သတိရှိဖို့ သတိထားကြစို့ _ အရှင်ဆေကိန္ဒ
သတင်းသမားသတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့်စကားသံများ _ မေငြိမ်း
သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁ _ သပြေကန်ဆရာတော်
သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် ၂ _ သပြေကန်ဆရာတော်
သပြေညို _ မင်းသုဝဏ်
သဘာဝ _ ခင်မောင်ဇော်
သမထဘာဝနာနှင့် ၀ိပဿနာတို့တွင် အောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခြင်း _ ဖါးအောက်တောရဆရာတော်+
သမီးလေးဖတ်ဖို့ _ မောင်သာချို
သမိုင်းနှင့်စကားပြောခြင်း _ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
သရဏဂုံဝိနိစ္ဆယကျမ်းသစ် _ လယ်တီဆရာတော်
သာသနဒါယဇ္ဇ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သာသန၀ိသောဓနီ.ပထမတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
သာသန၀ိသောဓနီ.ဒုတိယတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
သာသန၀ိသောဓနီ.တတိယတွဲ _ လယ်တီဆရာတော်
သာသနာ့တံခွန် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ထူး သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရား _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် ဝိနည်းဓိုရ်ဖန်တီးရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) _ ဘုရားသားတော်
သာသနသမ္ပတ္တိ ဒီပနီ _ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး
သာသနာ့အမွေကိုခံယူခြင်းနှင့်ငါလုပ်ချင်တာ _ ဦးရေ၀တ
သီလ၀ိနိစ္ဆယ _ လယ်တီဆရာတော်
သီချင်းထဲကဓမ္မ.ဓမ္မထဲကအလင်း _ မြသန်းစံ
သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ _ ဦးဖိုးကျား
သီဟိုဠ်ခေတ် စံတော်ဝင်အရိယာများ _ ဦးဌေးလှိုင်
သုကုမာရမဂ္ဂ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သုခမှတ်စု _ သုခ
သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ _ မိုးကုတ်ဆရာတော်
သုတေသန သရုပ်ပြအဘိဓါန် _ ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော်
သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန် ၂၀၀၇ _ ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော်
သုံးဖော်ညီနောင် _ ဒဂုန်ရွှေမျှား
သူ _ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်
သူတော်ငတေ၏ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုတိုများ _ ဝေယံလင်းခေါင်
သူတို့နဲ့ကျွန်တော် _ အောင်သင်း
သူတို့ပျော်ကြလေပြီ _ အကြည်တော်
သူတို့အမြင် သူတို့အတွေး _ ပါရဂူ
သူနာပြုလက်စွဲ _ ဒေါက်တာစံပယ်ပွင့်ဖြူ
သူပုန်ကြီး _ ဇ၀န
သူရေး၍သူကြိုက်သောဝတ္ထုတိုများ _ မြင့်သန်း
သူလိုဘုရင် _ ပါရဂူ
သူ့ကိုစောင့်ရှောက် ကိုယ့်ဂုဏ်မြောက် _ ယောဆရာတော်
သေကိန်းဆိုက်တဲ့ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ _ အောင်သင်း
သေပြေးရှင်ပြေး _ မောင်ပေါ်ထွန်း
သေသည်၏အခြားမဲ့၌. သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ _ ဦးအေးမောင်+
သောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေး _ တက်တိုး
သောက.ဒေါသ.အတ္တ ဘ၀အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှားအံ့ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
သောမနသုပေက္ခာ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သဲလှည်း _ အကြည်တော်
သံယောဇဉ်ဖေဖေ _ မြင့်စိုးလှိုင်
သက်သတ်လွတ်နှင့်ကုသိုလ်စိတ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
သင်္ချာပညာ ငါဆရာ _ မောင်ဒီ
သင်္ဂါယနာတင် သမိုင်းစုံ _ မာဃ
သစ္စတ္ထ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သစ္စာ၎ပါးတရားတော် _ မိုးကုတ်ဆရာတော်
သစ္စာလေးပါးတရားတော် _ ချမ်ေးမြ့ဆရာတော်
သည်ဆောင်းဟေမန် _ သုခ
သဒ္ဒသံခိပ်ကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
သန်းကောင်ယံ အမေးအဖြေများ _ အရှင်ကောဝိဒ
သဗ္ဗေသတ္တာနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ _ သုခ
သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
သောတာပန်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်-ဝေဒနာဝိပဿနာရှုနည်း _ မိုးကုတ်ဆရာတော်
သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ် _ ဦးကျော်လှ
သံစုံကြူးတဲ့ည _ နီကိုရဲ
သန္ဓေကာတာ _ ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေလ်း
သိက္ခာရှိတဲ့မုန့်ဟင်းခါး _ မိုးမိုး
သိပ္ပံနယ်လွန် ဗုဒ္ဓဘာသာ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
သိပ္ပံမှသည်သစ္စာဆီသို့ _ ချစ်ငယ်
သိပ္ပံအမြင်နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအမေးအဖြေများ _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
် သိုက် _ မိုးဆက်လင်းထက်
သုဿန်မြေက မိစ္ဆာ _ သတိုးတေဇ
သွေး _ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး
ဟူးကောင်းတောင်ကြား _ ဖိုးကျော့
ဟစ်တလာ-ချိန်ဘာလိန် ဘယ်သူမှားခဲ့သလဲ _ သိန်းဖေ
ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်ပြဒါးရှင်လုံး _ နန္ဒသူ
ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် အက်ဇခါဘန်အကျဉ်းသား _ ကြည်ကြည်မာ
အကောင်းဆုံးဘ၀လမ်းညွှန်မှု _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
အကျော်ဒေးယျ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ _ သုခ
အချစ်ကံခေပေမဲ့အနှစ်ကျန်စေရမယ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အချစ်ဗေဒင် _ စံဇာဏီဘို
အချစ်ဘ၀နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ _ သန်းမြင့်ဦး
အချစ်ရဲ့နက္ခတ် _ ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ်
အချစ်လက္ခဏာ _ စံဇာဏီဘို
အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသတည်း _ အကြည်တော်
အခြေပြုပဋ္ဌာန်း _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
အငြိမ့် _ သုခမိန်လှိုင်
အစုစပ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေ _ ဦးကျော်ဇေယျ
အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များနှင့်ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းများ _ သုသုက
အဆိုအမိန့်များ _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများ _ မလေးငြိမ်
အနာဂါရိကဓမ္မပါလ _ ရွှေဘိုမိမိကြီး
အနာဂတ်သာသနာရေး _ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ ပါဌ်နိဿယ _ ဗားကရာဆရာတော်
အမေနှင့် အမေ့အကြောင်း _ ချစ်စံဝင်း
အမေးနှင့်အဖြေ အထွေထွေ _ ခင်မောင်ဇော်
အမှတ်တရ ရွှေ၆၀ _ ၀င်းငြိမ်း
အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတွေးအမြင်စာစုများ _ ဦးရွှေအောင်
အမြင့်ပျံလင်းယုန်အားဂုဏ်ပြုခြင်း _ ကျွန်းပြန်ရဲဘော်တစ်ချို့
အမွေ _ အောင်သင်း
အရိယ၀ါသတရားတော် _ မဟာစည်ဆရာတော်
အရည်အသွေး _ ချစ်စံဝင်း
အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ-၁ _ သိန်းဖေမြင့်
အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ-၂ _ သိန်းဖေမြင့်
အာဟာရနှင့်ဆိုင်သောကျန်းမာရေး.. _ ဒေါက်တာအေးကျော်
အားထုတ်ဖြစ်ဖို့အဓိက _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အေးမြရွှင်ပြုံးလူ့နှလုံး _ ယောဆရာတော်
အတွင်းတိမ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ _ ဒေါက်တာမင်းသိမ်း
အနာဂတ်ကို မကြောက်နဲ့ _ အောင်သင်း
အနာဂတ်မျက်လုံးရှင် _ အောင်ခန့်
အနုပညာသစ်တစ်ပင်ဖြစ်တည်မှုနှင့်.. _ သစ်မွှေး
အနှစ် ၃၀ _ ချစ်နိုင်
အနှစ်ထုတ်ယူစွမ်းတဲ့လူ _ ယောဆရာတော်
အနောက်တိုင်းမှ နုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏အဆိုများ _ ဦးသက်ထွန်း
အနတ္တ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
အနတ္တဒီပနီ ကျမ်းသစ် _ လယ်တီဆရာတော်
အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက်
အနှိုင်းမဲ့ရဟန်း _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
ံအနိုင်းမဲ့ဘာဝနာ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အနှိုင်းမဲ့အဖေါ် _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အနှိုင်းမဲ့အလှူ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အနှိုင်းမဲ့ဥစ္စာ _ အရှင်ဆန္ဒာဓိက
အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း သံပေါက်လင်္ကာ _ လယ်တီဆရာတော်
အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ပထမတွဲ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ဒုတိယတွဲ _ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
အလင်းကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
အဟိတ်..၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ _ သိပ္ပံမောင်ဝ
အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကိစ္စ _ မောင်ဒီ
အစ္စလာမ့်အတိတ်သမိုင်းမှ အယူဝါဒဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ _ ဦးစိုးလွင်
အတွေးများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း _ ရဝေနွယ်
အာဇာနည် _ ဦးနု
အာနာပါန ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
အာဟာရ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
အူလှိုက်သည်းလှိုက်ဟာသ _ ငွေကြည်
အိုဟင်နရီ၏၀တ္ထုတိုများ _ မောင်ထွန်းသူ
အင်တာဖျီးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် _ ကံချွန်
အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း _ သိပ္ပံမောင်ဝ
အောင်ဆန်းသူရိယဗိုလ်တိုက်ချွန်း _ တက္ကသိုလ်စိန်တင်
အိုင်ဒီယာအက်ဆေးများ _ နေ၀င်းမြင့်
အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်. _ အကြည်တော်
ဣတ္ထိယနှင့်ဆေးပညာ _ ဒေါက်တာနန်းဥမ္မာ
ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်မြို့  , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန်လ _ ဦးရ၀ိန်
ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရအဘိဓါန် _ ဦးကျော်ဇေယျ
ဥပဒေသမား လက်စွဲစကား _ ဦးကျော်ဇေယျ
ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆိုလ _ သင်္ဃဇာဆရာတော်
ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာအလင်းပြကျမ်း _ လယ်တီဆရာတော်
ဥတ္တမပုရိသ ဒီပနီ _ လယ်တီဆရာတော်
ဦးပေါ်ဦး၏ စကားအလင်္ကာ _ ဦးလှအောင်
ဦးနေ၀င်း၏ပြာတစ်ဆုပ် _ ကြေးမှုံဦးသောင်း
သြကာသ ဋီကာ _ အရှင်ဓမ္မပီယ
သြ၀ါဒစကားများ _ ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော်
အကိုလင်းထင် ဆိုဒ်လေးက အကုန် ယူလာခဲ့တာပါ။
အဲ့အတွက် အကိုလင်းထင်ကို ကျေးဇူး ဥပကာရ တင်ရှိပါတယ်။
ယူလာစဉ်က ကွန်မန့်အမှာစကား ခွင့်တောင်းထားဖို့ ကြည့်ပါတယ်။ ရှာမတွေ့လို့ ဒီအတိုင်း ယူလာခဲ့ရပါတယ်။ ခွင့်ပြုကြပါလို့။
အကို လင်းထင်ရဲ့ ဆိုဒ်လေးက ဒီမှာပါ။
မင်းသိင်္ခ – ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း၁အပိုင်း ၂ (07/24)
မင်းသိင်္ခ – ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၁အပိုင်း ၂ (07/24)
အခုအောက်က စာအုပ်စာရင်းလေးက ကြာပါပြီ။ အချို့ဟာတွေဆို မေးလ်တွေနဲ့ ဖော်ဝတ် ရှယ်ထားကြတာ တော်တော် များများ သိကြမှာပါ။ စုစည်းတဲ့အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီအထဲမှာ တစ်ချို့စာအုပ်တွေက လင့်ခ် သေနေပါပြီ။ ဒေါင်းမရတော့တာမို့ ပြန်ဖျက်ဖို့ စစ်ထုတ်ရပါဦးမယ်။ အေးအေးဆေးဆေးဆို ပြန်ရှာပြီး ဖယ်ထားပါ့မယ် ခင်ဗျာ။ အခုတော့ ယူလာရာ နေရာလေးက အတိုင်း တင်ထားပါတယ်။
ကျနော့မေးလ်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ အတိုင်းဆိုရင် ဒီအောက်က စာရင်းလောက် မပြည့်စုံပါဘူး။ ဒီလို အပြည့်အစုံ ဖြစ်အောင် တင်ထားပေးတဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးကို Credit ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ အားလုံးပဲ။ 🙂 ။
မစုံလင်ရင် ပုံပြင်လို့သာမှတ်။ 🙂
ဆန်းလွင် _ ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်က…
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀…
ဘုရားသားတော် _ သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် ဝိနည်းဓိုရ်ဖန်တီးရေးဥပ…
မြန်န်မာသမားတော်ကြီးများ _ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံန…
ရန်အောင်မောင်မောင် _ ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တ…
၀င်းတင့်ထွန်း _ ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင…
သင်္ဃဇာဆရာတော် _ ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် …
အရှင်ရဋ္ဌသာရ _ ဂမ္ဘီသာရပျို့ စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် ,…
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း , ပြည်ကြီးမန်တိုင်စာပုံနှိပ်…
အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ _ နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁…
အောင်သင်း _ မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House…
အုတ်ဘိုဆရာတော် _ စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက် ,…
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန…
ဦးလှ _ ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပတွဲ , မြန်မာ့သိပ္ပံစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန…
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တု…
ဦးဣန္ဒောဘာသ _ ၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋက…
*Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf &…
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POON…
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 2Encyclopedia of Physical Science
Love and Sympathy in Therav